Football Khabar » बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानलाई कति नम्बर जर्सी दिँदैछ ?
बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानलाई कति नम्बर जर्सी दिँदैछ ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले अघिल्लो दिन मात्रै अनुबन्ध गरेका नयाँ फ्रेन्च स्टार खेलाडी एन्टोनी ग्रीजम्यानलाई कति नम्बरको जर्सी देला ? यो धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
स्पेनिस मिडियाका अनुसार २८ वर्षीय फरवार्ड ग्रीजम्यानले बार्सिलोनामा ७ नम्बरी जर्सी नै लगाउने प्रायः पक्का छ । उनले एथ्लेटिकोमा छँदा ७ नम्बर जर्सी नै लगाउँथे । यता, विश्वकपविजेतासमेत रहेका उनले फ्रान्सको राष्ट्रिय टिमबाट पनि ७ नम्बर जर्सी नै लगाउँछन् ।
तर, बार्सिलोनामा हाल ७ नम्बर जर्सी ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिपे कोउटिन्होले लगाइरहेका छन् । यो बताइएको छ कि, बार्सिलोनाले सबैभन्दा पहिला ग्रीजम्यानलाई अन्य नम्बर रोज्न विकल्प दिनेछ ।
यदि उनी अन्य नम्बरको जर्सीमा इच्छुक नभए बार्सिलोनाले कोउटिन्होको जर्सी नम्बर ग्रीजम्यानलाई दिनेछ । तर, यसमा कोउटिन्होको समझदारी आवश्यक हुन्छ । यदि कोउटिन्होले सहमतिमै ७ नम्बर जर्सी नछाडे बार्सिलोनाले एकतर्फी निर्णय गरेर पनि सो जर्सी ग्रीजम्यानलई दिन सक्नेछ ।
तर, बार्सिलोनामा ग्रीजम्यानभन्दा कोउटिन्हो पहिला आएको र महँगा खेलाडी भएकाले उनले सजिलै ७ नम्बर जर्सी नछाड्न सक्छन् । यद्यपि, कोउटिन्हो अझै पनि बार्सिलोनाले बेच्न सक्ने खेलाडीको सूचीमै रहेकाले ७ नम्बर जर्सी ग्रीजम्यानले नै पाउने सम्भावना प्रबल छ ।
प्रकाशित मिति २८ असार २०७६, शनिबार १४:०१